बहसमा निजगढ विमानस्थल– ४
नवराज कुँवर बारा, २७ पुस
बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चारवटा चुनौती देखिएका छन् । यी चुनौती चिर्न सके मात्रै विमानस्थल बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
निजगढमा रहेको विमानस्थल निर्माण आयोजनाले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, तीभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै छन्, जुन काम टुङ्ग्याए मात्र विमानस्थल निर्माणको काम सजिलै अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यताबारे २०५४ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन)ले अध्ययन गरेको थियो । नेपिकोनले देशका विभिन्न ८ स्थानमध्ये निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दियो ।
२०६८ सालमा सरकारले कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वर्ल्डवाइडले बनाएको विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र २०७५ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरियो ।
यसरी सबै खाले अध्ययन र पूर्वकार्यहरू पूरा गरी सरकारले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोजनाका तर्फबाट पनि केही काम भए ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला तोकिसकिएको छ । पूर्व र दक्षिण सिमानामा ५०–५० मिटरमा पिलर गाडेर सिमाना छुट्याइएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र परेका १ सय १० बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । हाईवेबाट निर्माण क्षेत्र हुँदै दक्षिणतिरका वस्तीमा जाने बाटोको छेउमा तारबार गरिएको छ ।
राज्यकोषको ६८ करोड रुपैयाँ खर्च
यी सबै काम गर्दा अहिलेसम्म राज्यकोषको ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादव बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यी हुन् चार चुनौती
विमानस्थल बनाउने नै हो भने खासगरी चारवटा चुनौती चिर्नै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा २५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय विमानस्थल चर्चामै सीमित हुनेछ ।
रूख कटान : यथार्थ फरक
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि ८ हजार ४५ हेक्टर जमिन पहिचान गरिएको थियो । एयरपोर्ट र एरो सिटीका लागि पहिचान गरिएको यो क्षेत्रफल तयार गर्दा झण्डै २४ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसो गरियो भने वातावरण सन्तुलनमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै वातावरणविद्ले विरोध गरेपछि आयोजनाले पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टरमा मात्रै काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो क्षेत्रफलभित्र १ लाख ३५ हजारवटा मात्रै रूख काटिन्छन् ।
यद्यपि, वातावरणविद्ले चित्त बुझाएनन् र सर्वोच्चको सहारा लिएर रूख काट्न रोक लगाएका छन् । सर्वोच्चले तत्काल रूख नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै विमानस्थल निर्माणको काम अन्योल बनेको छ । आयोजनाले रूख काट्ने काम विकासकै लागि भनेको छ तर धेरै सशंकित छन्, ‘रूख काटिसकेपछि विमानस्थल नबनाएर प्लटिङ गरेर जमीन बेचिने हो कि !’
त्यसैले सरकारले विश्वस्त नतुल्याएसम्म सर्वोच्चले पनि यति सजिलै रूख काट्न अनुमति दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
रूख काट्न सर्वोच्चले रोक लगाएपछि यस वर्ष २६ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । आयोजनाले नेपाली सेनासँग साइट क्लियरेन्स, आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न सडक, पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
‘बाटोलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र रूख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता भएअनुसार एसआईएमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो, यसका लागि २६ करोड खर्च गर्ने कुरा थियो’, निमित्त प्रमुख यादवले भने, ‘तर रूख कटान गर्न रोक लागेकाले यो रकम फ्रिज हुने भएको छ ।’
जटिल टाँगिया वस्ती व्यवस्थापन
सर्वोच्चले रूख काट्न मात्र रोकेको हो, अन्य काम गर्न रोकेको होइन । तर, मुख्य मानिएका काम पनि भएका छैनन् । टाँगिया वस्ती व्यवस्थापनको विषय निकै जटिल छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतिर वन क्षेत्रमा रहेको यस वस्तीमा १ हजार ४ सय ७६ (२०६८ सालको जनगणनाअनुसार) घरधुरी छन् । २०२७ सालमा वृक्षरोपण र संरक्षणका लागि भनेर वनको बीचमा १ सय १८ घरधुरीलाई राखिएको थियो ।
तीनै घरधुरी बढ्दै गएर अहिले करिब १ हजार ५ सय पुगेका छन् । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– १६ मा पर्ने यस वस्तीले वन क्षेत्रको साढे ६ सय हेक्टर जमिन ओगटेको छ ।
प्रस्तावित विमानस्थलको मुख्य धावनमार्ग पर्ने टाँगिया वस्ती भएकै क्षेत्र हो । यसमा ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गरिनेछ । तर, टाँगिया वस्तीको व्यवस्थापनका लागि कुनै निर्णय भएको छैन ।
टाँगिया वस्तीवासी विमानस्थल निर्माणका लागि ठाउँ छाड्न तयार छन् तर उनीहरूले स्थानान्तरण हुनुपर्दा प्रति घरधुरी २ बिघा ५ कट्ठा जमिन माग गरेका छन् ।
‘यो ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भव्य विमानस्थल बन्नु त गर्वको कुरा हो, हामी ठाउँ खाली गर्न तयार छौँ’, टाँगिया वस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटा भन्छन्, ‘तर वस्तीको उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।’
विमानस्थल निर्माण आयोजनाले उनीहरूलाई आयोजनास्थलकै दक्षिणी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘उहाँहरूको माग, जमिनको उपलब्धता र राज्यले प्रदान गर्न सक्ने जमिनबारे अध्ययन सकेर हामीले एक खालको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौँ’, आयोजनाका निमित्त प्रमुख यादवले भने, ‘हामी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’
यादव पनि टाँगिया वस्ती व्यवस्थापन नभएसम्म विमानस्थल निर्माणको काम अल्झिरहने बताउँछन् । ‘यो आफैँमा ठूलो चुनौती हो, यसको व्यवस्थापन नगर्दासम्म काम अड्किई नै रहन्छ’, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्रै परेको काठगाउँ वस्तीका बासिन्दा विमानस्थल निर्माणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तत्कालै स्थानान्तरण हुन तयार देखिएका छन् । ‘उनीहरूको हकमा समस्या छैन’, यादव भन्छन् ।
यसबाहेक निर्माण क्षेत्रको पश्चिमी सिमानामा रहेको पर्साहा खोला नदी नियन्त्रणको काम पनि चित्तबुझ्दो नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
विमानस्थल कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (एजी)लाई छनोट गरी विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष चैत महिनामा भएको लगानी सम्मेलनमा ७ देशका कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । लगानी सम्मेलनमा आसय पेस गर्नेमध्येबाट ज्युरिच एयरपोर्ट एजीसँग विस्तृत प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) मागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
तर, विभिन्न आन्तरिक समस्या समाधान हुन नसकिरहेका बेला विदेशी कम्पनीले काम गर्ने कुरा धेरैले पत्याएका छैनन् । लगानी मोडालिटी टुङ्गो लागेर काम अघि नबढेसम्म विमानस्थल बन्ने कुरामा निजगढवासी नै ढुक्क देखिँदैनन् ।
‘केही शंका पक्कै छ तर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, यहाँका नागरिकको चाहना यही छ’, जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘आन्तरिक समस्या हल नगरी विदेशी कम्पनीले आएर काम नगर्न पनि सक्छ तर पहिले हामीभित्रैको समस्या हल गर्नुपर्छ ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी लगानी मोडालिटी नै कुनै पनि आयोजना निर्माणको प्रमुख पक्ष भएको बताउँछन् । ‘निजगढ विमानस्थलको लगानी मोडालिटी के हुने, यसको मास्टर प्लान, डीपीआरलगायतका कुरा नटुङ्गिएसम्म विमानस्थल बन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन, यो आफैँमा एउटा चुनौती हो’, डा. अधिकारी भन्छन् ।
‘सरकार आफैँ चुनौती’
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको कार्यशैली नै चुनौतीपूर्ण देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अनेक व्यवधान आउँदा पनि सरकार करिव मौन देखिएको विकास तथा पूर्वाधार मामिलाका विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यकाे भनाइ छ ।
‘सरकारले बलियो इच्छाशक्ति देखाएको भए यो विमानस्थलको महत्त्व र आवश्यकताबारे व्यापक प्रचार गर्नुपर्थ्याे । अहिले पनि विभिन्न खालका चुनौती देखिएका छन्, यसमा सरकार मौन छ भन्दा फरक पर्दैन’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘यत्रो ठूलो प्रोजेक्टलाई अवरोधरहित बनाउने, अवरोध आए तत्कालै हल गर्ने दिशातिर सरकार अग्रसर देखिँदैन ।’
बोलेर भन्दा व्यवहारमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव पनि सरकारकै कारण निजगढमा विमानस्थल निर्माणको काम अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘यत्रा ठूलाठूला समस्या आउँदा पनि सरकारले सरोकारवालासँग अलिक प्रभावकारी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन’, देव प्रश्न गर्छन्, ‘अनि विमानस्थल निर्माणमा सरकार गम्भीर छ भनेर कसरी पत्याउने ?’
न्यायालयले पनि विकासको विपक्षमा फैसला नगर्ने भन्दै विमानस्थल निर्माण गर्दा काटिने रूख र त्यसको सट्टा अन्यत्र वृक्षरोपण गरिने रूखको विवरण सरकारले पेस गरे सर्वोच्चको फैसला निर्माणकै पक्षमा आउने उनको विश्वास छ
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २७, २०७६, ०८:०६:००